Shacbiga : Shariifkii beey sharaxdeen; Shiikhii beey iska -shub, dheheen..
Xil-dhibaanada Baarlamaanka Federalaaka ee ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda Soomaaliya, waxeey xalay- 15 Sep 2004 doorashii dhacday, ugu shubeen codkooda ama vot-koodii tiradiisa badneeyd : Shariif Xasan Shiikh oo u dhashay Digil iyo Mirifle ama Raxan-weyn.
Shiikh Aden Maxamed ( Aden Madoobe ) - Digil iyo Mirifle ama Raxanweyn u dhashay, asagana iska-shub eey dhaheen.
Labadaan nin, oo soomali ahaana isku reerka ah, ayaa wareega sadexaad iskugu soo baxay oo Final-aha isku soo fariistey, qofkii noqon lahaa Af-hayeenka ama Speaker-ka, Baarlamaanka TNFG ( Transitional National Federal Goverment) .
Shariifka, aad iyo aad buu ugu farxay, jagadaas loo dhiibay ee 5-ta sanno ah.
Shariifka, asagoo uurka ka hadlaayana, wuxuu u duceeyey, Dir, Daarood iyo Hawiye intii u codeeysay oo jagadaan u garatey.
Shiikh Aden Madoobe, waxaa uu cod ahaan helay : 105 xil-dhibaan oo u codeeysay, laakiin hal-dheeri, eey guusho aheeyd, waxaaba laga hormaray ilaa 51 cod ama vote oo Shariifka ayaa ka sareeyey.
Gudoomiyahii Baarlamaank ee Xirsi Bulxan Faarax oo da`weyni meesha ku sii haye inta laga dooranaayo, Af-hayeenka baarlamaanka, ayaa markeey doorashii dhamaatey, ku sharfay - Shiikh Aden Madoobe, bal in uu laba kalmo oo usluub, ku jirto meesha ka yiraahdo, - Waan Aqbalay in leyga guuleeystey, waana la shaqeeyn doonaa, walaalkeeyga soomaliga ah, ee loo doortey jagadaan waa Shariifkee - ka dibna xil-dhibaanada u sacbiyaan Shiiikha Adena, oo meeshaas taariikhda berri lagu faano uu ka dhaxli lahaa.
Shiikh Aden Madoobe, caradoo carooday ama xanaaquu -xanaaqay, wuxuu caayey xil-dhibaanadii iyo systemkii meesha ka jiray ee doorashada aheeyd.
Odaygii, Xil-dhibaan Xirsi Bulxan ahaa, afka uu qabsaday oo jahwareeray, hadalada ka soo yeeraaya - Shiikha Aden Madooba ah.
Xil-dhibaanadii, meesha fadhiyey markeey arkeen, Shiikha in uu Shariifka guusha u diidan-yahay ayagana laaluu-sh- qaatayaal ku tilmaamay, foori iyo sawaxan eey kala hortageeyn odaygii Shiikh Aden ahaa oo meesha taagan, waxaanba ku xasuustey - sannad hore Oskarka markii la siiyey Michael Moore soo saarihii filimkii Bowling for Columbine oo - Shame on you Bush-dhahay, arinta dagaalkii Iraq awgiis, kooxdii meeshaas fadhiday oo foori kala hortagtey Michael Moore qaarna raali ka ahaa oo u sacbiyey.
Hadda Shiikh Aden Madoobe, 100-ka , asaga doortey hadalkiisa waa u sacbinaayaan, kuwa kalena waa ku foorinaayaan, waana arin la fahmi karo oo OK ah.
Shiikh Adenoow, ogo-loow, in Shariifka shanta sanno soo socoto, "soomaali " kala shabiyo, si sharci ah.
Shiikh Adenoow, sheeydaan hanagu noqon oo shar u horseeda, bur-burka baarlamaanka TNFG.
Shiikh Aden, baarlamaankaan cusub 20% wax ma qoraan, mana akhriyaan si fiicanna waad u ogtahay arintaas, laga yaabee in eey isku-qaladeen - shariifka iyo shiikha - hadeey taas dhacdayna ka raali noqo, Al-Gore-ba, wuxuu doorashada Bush -kaga adkaaday, kumaan-kun, oo aan wax qorin waxna akhrin, inteey la haayeen Al-Gore ugu rida beey, wax qaldooma iyo kuwo eey ugu ridaan Bush iyo kuwo kale oo musharax Pat Buchanan la dhaho ugu rida- shiikh Aden raali raali noqo.
Shiikh Adenoow, SRRC weey kuu dadaashay, fiiri Iimaan Hiloowle SRRC oo Hawiye ah, taladooda markuu diiday ......hal cod oo kaliya .....ayaa doortey, macno kale hadaan u dhahno, asaga ayaa is-doortey, oo cid dooratey ma jirto.
Shiikh Aden Madoobe, xalay waa ceeboowday, xushmadna ma aha, in - microphonka- aad ku caytanto, caradaada in aa qarsato baa fiicneeyd, oo usluubka ku jiray.
Shiikh Aden, midda kale dawladaha carabta iyo kuwa kale ee muslimiinta, shariif- markeey maqlaan waa jalboonaayaan oo dano badan baa noogu jira sidaas , Shariif Xasan -ul- shaaficiyal li-soomaalul - Qaadiriya- wal-ahlul sunna Wal-jamaaca.
Shariif Xasanow, waxaan ku leeyahay xil-adag baa qaaday ee iska ilaali ceebo waaweyn, 5 -ta sanno ee soo socda.
Heesta eey qaadi jirtey Allaha u naxariistee Magool, ayaa aheeyd :
-Nin lagu Seexdoow, Ha Seexan xil-baa sidaa e ha seexan-
Shariif Xasan, Cabdulaahi Cadaw iyo Cabdulaahi yuusuf .....laba Cabdulaahi kee is-leedahay waa la shaqeeyn kartaa, website-kaada noogu soo qor aa usbuucaan ka sii sheekeeysanno, fadhi-ku-diriryada ..
Gaba-gabo, xil-dhibaanadiina baarlamanka Dawladda Federalka Ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waa ku mahadsantihiin kuligiin, dul-qaadka iyo xil-kasnimada aad muujiseen xalay, 15 Sep, sidoo kale waxaan ku farxay markaan maantey laanta soomaliga ee bbc-da ka maqlay - Asli Xasan Cabaade in eey, lix-saacadood calankii Soomaaliga ahaa iyo dhar calan soomali u eg, la taagneey banaanka hawlka doorashada ka socotey.
�Dul-Ka-Xaadis: Maansadii 18 ee Doodwanaag [Anwar]
�DULMI-DIID: Maansadii 19aad ee Doodwanaag [Xiirane]
�Yaa xaq u leh hogaaminta dowlada Mbagati? [Saciid Himilo]
�GARGAAR iyo DHAWR - Gabay::: [Qore Shaafici]